आखिर कहाँ पुग्यो एमाले–माओवादी एकता ? – Saurahaonline.com
आखिर कहाँ पुग्यो एमाले–माओवादी एकता ?
काठमाडौँ, १० पुष । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्नेगरी छ बुँदे सहमतिमार्फत चुनावमा होमिएका दुई कम्युनिस्ट नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र)को एकीकरणमा ढिलाइ भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सुरु हुने दुवै दलका नेताले बताउने गरे पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई साता बढी समय भइसक्दासमेत संयोजन समितिको औपचारिक बैठक समेत बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसकेपछि पार्टी एकताप्रक्रिया नै धरापमा पर्ने आशङ्का कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता पङ्क्तिमै देखिएको छ। तर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुई दलका नेताबीच औपचारिक बैठक बस्न नसके पनि आन्तरिक रूपमा अनौपचारिक छलफल र संवाद जारी रहेको दाबी गरे। लक्की चौधरीले आजको गोरखापत्रमा खबर लेखेका छन्।
कात्तिक १५ गते बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकपछि औपचारिक रूपले अर्को बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी एकता गर्दा नेताहरूको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सोबारे अध्यक्ष ओलीले धारणा राखेका थिए। आगामी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अगाडि सार्ने एमालेले तयारी गरेपछि एकतापछि पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनुपर्ने तर्क माओवादी नेताको छ। यस विषयमा संयोजन समितिको बैठकले ठोस गृहकार्य र निर्णय गर्ने दुवै दलका नेताले बताउँदै आएका छन्।